SAAMAYNTA LACAG-LA’AANTA EE KORITAANKA DHAQAALAHA – USE24 GLOBAL MANAGEMENT COSULTANT
Saameynta ay ku yeelaneyso caalamiyeynta kobaca dhaqaalaha wali si buuxda looma baarin. Saameyntan aragti ahaan laguma qeexi karo inay tahay mid adag ama aan fiicnayn. Daraasadaha xasaasiga ah waxay muujinayaan in waddamo kaladuwan ay ka helaan faa iidooyin kaladuwan adduunka. Sidoo kale, cabbirada iyo cabirrada hoose ee caalamiyeynta badanaa waxay ku kala duwan yihiin xoogga saameynta ay ku leeyihiin waddamada ama xitaa wey ku kala duwan yihiin saameynta togan iyo tan taban. Sababtoo ah qeexitaankooda gaarka ah, saameynta ay ku yeelaneyso caalamiyeynta wadamada soo koraya ayaa dan gaar ah leh Shan ka mid ah dalalkaas, waxa loogu yeero waddamada BRICS ayaa lagu lafaguray warqaddan. Warqaddan waxay u aragtaa saamayn togan oo tirakoob muhiim ah oo caalamiyeynta kobaca dhaqaalaha waddamada BRICS 1993 ilaa 2016Eray bixin: BRICS waddammada, Caalamiyeynta, Kobaca.
Warqadani waxay sahmineysaa saameynta ay ku yeelaneyso kobcinta dhaqaalaha wadamada BRICS. Wadamadan ayaa ahmiyad gaar ah leh maadaama ay matalaan qayb muhiim ah oo adduunka ka mid ah (iyo gaar ahaan dhaqaalaha soo koraya) marka la eego tirada dadka iyo baaxadda suuqa. Warqadani waxay gacan ka geysaneysaa suugaanta xeeldheer ee saameynta ku yeelanaysa isu-tagga caalamiga Labada suugaan teori iyo aragtiyeedba waxay umuuqdaan inay bixinayaan cadeymo isku dhafan oo ku saabsan saamaynta ay ku yeelan karto kobcinta adduunka. Saameyntan waxaa badanaa lagu ogaadaa inay ku xiran tahay saamiga dhaqaalaha ama xilliyada la baarayo. Warqadda hadda jirta waxay adeegsaneysaa farsamooyinka casriga ah ee dhaqaalaha (falanqaynta xogta guddiga) si loo baaro saamaynta ay ku yeelan karto kobcinta dhaqaalaha kooxda BRICS dhaqaalaha muddada u dhexeysa 1993 illaa 2016. Warqaddu sidoo kale waa mid qiimo leh maadaama ay khuseyso nooca cusub ee KOF. index of globalisation (Gygli et al., 2019) taas oo la muujiyey inay ka faa’iideysan karto dhowr faa iidooyin marka la barbardhigo tilmaamayaasha hore ee caalamiyeynta Faa’iidadan gaarka ahi waxay noo oggolaanaysaa oo keliya inaan qiyaasno saamaynta guud ee tilmaamaha guud ee KOF ee caalamiyeynta ama qayb-hoosaadyadeeda dhaqaale (sida had iyo jeer lagu dabaqo suugaanta), laakiin sidoo kale in la kala saaro ganacsiga iyo isu-keenidda maaliyadeed. Natiijooyinkayagu waxay umuuqdaan kuwa soo jeedinaya in caalamiyeynta ay saameyn togan ku leedahay koboca dhaqaalaha ee wadamada BRICS. Warqaddu waxay u dhisan tahay sidan soo socota. Dib-u-eegis suugaaneed kooban ayaa lagu soo bandhigay Qaybta 2, oo ay weheliso cabbiraadda caalamiyeynta. Qaybta 3 waxay sharxaysaa habka cilmi baarista loo adeegsaday waxayna ka warbixisaa natiijooyinka ugu muhiimsan. Qaybta 4 waxay soo bandhigaysaa hadalada ugu dambeeya ee gabagabada ah.2. DIB U EEGID KOOBAN OO KU SAABSAN SUUGAANTA IYO QIIMAYNTA CAALAMKA2.1. Dib u eegis SuugaantaCaalamiyeynta iyo cawaaqibkeeda waxaa si kulul looga dooday suugaanta dhaqaalaha. Maaddaama caalamiyeynta ay tahay geedi socod aad u adag oo isku dayo badan oo lagu qeexayo ay jiraan. Midka lagu qaatay baaritaankaan wuxuu ku dhismayaa Gygli et al. (2019) oo laxiriira Dreher (2006) u kuurgalida Dhinaca shucuurta ereyga wuxuu u yimid inuu matalo dhamaan hoos u dhaca shirkadaha waaweyn ee awooda inay saameyn ku yeeshaan caafimaadka bulshooyinka yar yar iyagoo xiraya warshadaha, kala wareejinta maalgashiga, maaraynta suuqyada. Waa kuwa xoogga leh ee ka soo horjeeda kuwa aan awoodda lahayn.Laakiin caalamiyeynta ayaa sidoo kale lagu arki karaa aragtida Buckminster Fuller ee tuulada caalamiga ah. Waxayna noqon kartaa mid cabsi leh maxaa yeelay kakanaanta hay’adeed ayaa u muuqata inay ka saareyso saameynta heerka waddooyinka. Suuqgeynta – waa calaamadaha sida Coca-Cola, Nestle iyo Nike. Dhaqaalaha caalamiga ah waa qiimaha iyo dhaqdhaqaaqa lacagta sida qiimaha saliidda ama kookaha. Xidhiidhku waa CNN – laakiin sidoo kale waa web / internet fowdo: sidoo kale waa TradeMe. Caalamku wuxuu noqon karaa hanjabaad iyo fursad labadaba.Marka maxaa markaa muhiim ah ma aha jiritaanka geedi socodka laftiisa, laakiin – sida mawjadda – sida loo maareyn karo. Iyo yaa ka faa’iideysta qeybaheeda.Guud ahaan waxaan ku doodi lahaa in hadaan nahay reer New Zealand inaan sifiican uga shaqeyneyno caalamiyeynta xilligan…. In kasta oo aan ku dhibtoonayno inaan nahay kuwa wax qaata oo aad u yar! Waxaan leenahay shabakad ballaadhan oo ganacsi iyo cilaaqaadyo kale oo ka kala baxa min daraf ilaa adduunka kale; waxaan leenahay dhaqaale qaran oo furan oo tartan leh kaasoo soo saara wax soo saar iyo adeegyo awood u leh inay ku tartamaan suuqyada caalamiga ah; waxaan si tartiib tartiib ah u horumarinaynaa adeegyada dhoofinta qiimaha si aan isugu dheelitirno sicirkeenna qaadanaya dhoofinta aasaasiga ah; shaqo la’aan baa na haysata; waxaana haysanaa waxbarasho wanaagsan, caafimaad iyo adeegyo kale oo bulsho. Waxaan sidoo kale sumcad ku leenahay daacadnimo iyo qaab wax ku ool ah, taas oo naga dhigeysa meel wanaagsan wadahadallada aan la leenahay waddamada kale iyo hay’adaha juquraafi ahaan, labadaba aad iyo aad uga weyn uguna yar. Tanina waxay ka muuqataa doorka muhiimka ah ee nalagu casuumay inaan ka ciyaarno fagaaraha caalamiga ah – tusaale ahaan WTO, halkaas oo qof reer New Zealand ah uu madax u noqdo guddiga wadaxaajoodka beeraha – iyo gobol ahaan, halkaas oo deriskeenna Baasifigga ahi uu had iyo jeer faallo ka bixiyo sida ay u qiimeeyaan Wadashaqeynta wada-xaajoodka ka socda Madasha Baasifiga iyo fagaaraha kale ee gobolka.
Si kastaba ha noqotee, hantida adduunka iyo kheyraadkeeda – oo ay ku jiraan fursadaha ganacsiga – waa, nasiib darro, looma qaybin si caddaalad ah sida kuweenna naga go’an yareynta saboolnimada iyo kordhinta dimuqraadiyadda iyo caddaaladda bulshada ayaa jeclaan lahaa.Tani ma aha xaqiiqda qalad ee adduunka, laakiin waxay naga caawineysaa inay noo horseeddo dulucda su’aasha.Sideen uga dhigi karnaa caalamiyeynta, tuulada caalamiga ah, adduunyada sii yaraanaya inay sifiican ugu shaqeeyaan masaakiinta? Inta aynaan halkaa u tagin, aan is xusuusino waxa saboolnimada iyo caddaalad-darrada ka jirta adduunkan sii kordhaya ee adduunkeennu ku saabsan yahay. Yoolalka Horumarka Millennium – oo waa inaanan ilaawin in kuwani sidoo kale ay yihiin natiijada ka soo if baxday adduunka – ngos iyo dawladaha wada shaqeeya waxay bixiyaan bar bilow wanaagsan. Waxay naga caawinayaan in aan qeexno waxa aan uga jeedno saboolnimada waxayna noo fidiyaan bartilmaameedyo caalami ah oo lagu heshiiyey tallaabooyinka aan ku heshiinnay in wax looga qabto.Aynu soo qaadanno seddex ka mid ah tilmaamayaasha Himilada Horumarinta Millennium, dakhliga qofkiiba (oo lagu hagaajiyay sinnaanta awoodda wax iibsiga si tirada loo barbar dhigo); dhimashada dhallaanka – tirada carruurta kunkii dhalasho ee nool ee dhiman doona ka hor dhalashadooda koowaad); iyo ugu dambeyn dhimashada hooyada – tirada hooyooyinka u dhiman doona dhalmada darteed.Ka dibna aan eegno sida annaga, iyo dalal kale oo kala duwan, qaar gobolkeenna ka yimid iyo qaar ka fogfog, aan isugu ururinno.Marka hore, dakhliga qofkiiba.Annagu haddaan joogno New Zealand waxaan leenahay celcelis dakhlikiiba qofkiiba oo kudhowaad $ US 22,500. Tani waxay si uun uga dambayn kartaa Noorway, laakiin waxay kudhowaad afar jeer ka badan tahay Fiji; in ka badan siddeed jeer ayuu ka sarreeyaa Papua New Guinea; isla markaana ilaa 30 ilaa 40 jeer ka sarreeya kuwa la midka ah ee Tanzania iyo Sierra Leone. Sidaad filan lahayd, cabirka noocan oo kale ah ee dakhliga qofkiiba soo maro wuxuu u marayaa caafimaadka iyo tirakoobyada kale ee bulsheed ee la-hawlgalayaasha adduunkan sii kordhaya.Oo halkan waxaan runtii ka hadlaynaa wejiga dhabta ah ee saboolnimada – carruurta iyo hooyooyinkood oo u dhinta si aan loo baahnayn iyo in badan si fudud saboolnimadooda darteed.
Halkan waxaan joognaa New Zealand Warbixintii ugu dambeysay ee Horumarinta Aadanaha ee UNDP waxay sheegaysaa in heerarkeena dhimashada dhallaanka iyo 5 ay yihiin 5 halkii kun ee dhalashada ah iyo 7 halkii 100,000 ee dhalashada ah siday u kala horreeyaan. Oo mid kasta oo ka mid ah dhimashooyinkani waa masiibo shaqsi, qoys iyo bulsho. Marka maxaan ka yeelnaa tirakoobka Fiji iyo Papua New Guinea, halkaasoo fursadaha ilmuhu ku dhiman karo ay ka sarreeyaan saddex iyo 14 jeer, ama in hooyadu dhimato ay ka sarreyso 10 iyo in ka badan 40 jeer halkan New Zealand? Tanina waa dhamaadka cirifka saboolnimada iyo sinnaan la’aanta. Haddii qoyskaagu ku noolaan lahaa Tansaaniya, ilmahaaga dhasha waxay u badan tahay 20 jeer inay dhintaan ka hor dhalashadooda koowaad, iyo xaaskaaga ama gabadhaada in ka badan 200 jeer ayay u badan tahay inay ku dhintaan dhalmada, halka ay ka joogaan halkan New Zealand. Dabcan celcelis ahaan celceliskan qaran ayaa naftooda qarinaya qaybta xigta ee sinnaan la’aanta: kala duwanaanshaha dakhliga iyo rajooyinka nolosha ee kala duwan ee u dhexeeya taajiriinta iyo masaakiinta ku dhex nool ummadaha kala duwan. Tusaale ahaan, waddan sida Niger oo kale ah, in ka yar 5 boqolkiiba dhalashada kuwa ugu saboolsan 20 boqolkiiba dadka waxaa goobjoog ka ah xirfadle caafimaad oo xirfad leh. Iyo sida aad filayso in tirooyinkan ay ka muuqdaan heerarka dhimashada dhallaanka, taas oo boqolkiiba 50 ka sarreeya carruurta ku jirta boqolkiiba 20 ugu hooseeya kuwa ku jira kuwa ugu qanisan 20 boqolkiiba. Caqabadaha dhaqaale iyo bulsheed ee inala gudboon ayaa ah kuwo cad oo dhab ah.Waa tilmaamayaasha noocan ah ee saboolnimada ay tahay inaan diiradda saarno markaan tixgelinayno sida ugu wanaagsan ee aan saameyn ugu yeelan karno una maamuli karno geeddi-socodka caalamiga.Marka maxaan qabanay iyo waxa intaa ka badan oo aan qaban karno, reer New Zealand ahaan iyo qayb ahaan dadaal caalami ah oo ballaaran?Saxiixida Baaqa Millennium-ka iyo Yoolalka Horumarinta Millennium-ka waa hal shay.Hubinta in dhammaanteen aan horumar ka sameyno mabaadi’daas waa mid kale.Waxaa jira u janjeera in la tilmaamo halka MDG-yada aysan suuragal ahayn in laga fuliyo. Muuqaalka jiilalka boqolaalka milyan ee dadka ah ee ku nool Afrika iyo Aasiya oo sii wadaya wajahaya heerarka saboolnimada ee aan ka heli lahayn gebi ahaanba aan la aqbali karin New Zealand waa khatar aad u dhab ah. Si kastaba ha noqotee, waayo-aragnimada adduunka ayaa muujineysa in, halka ay xaaladuhu sax yihiin, horumar la sameyn karo.Heerarka dhimashada dhallaanka iyo hooyada iyo tilmaamayaasha kale ee saboolnimada way yaraan karaan waana la dhimi karaa.Heerarka dhimashada dhallaanka ee New Zealand waa in ka yar saddex-meelood meel sida ay ahaayeen 1970.Iyo,
in kasta oo ay weli sarreeyaan, haddana sidoo kale si weyn ayaa loo yareeyay Fiji iyo Papua New Guinea.Dhawaan boqolaal milyan oo qof ayaa awood u yeeshay inay ka baxsadaan saboolnimada buuxda ee Shiinaha iyo qaybaha kale ee Koonfurta iyo Koonfurta-Bariga Aasiya.Marka horumar si cad waa macquul. Kaalmada horumarineed waa qayb ka mid ah isla’egta, waxaanan markhaati ka nahay dib u soo nooleynta ballanqaadyadii caalamiga ahaa ee la sameeyay sannadihii 1970-yadii, xilligii Baaqa Millennium-ka iyo mar labaad Monterrey 2002, si loo gaadho yoolka ah 0.7% ee Dakhliga Guud ee Guud ku bixisay kaalmada rasmiga ah ee horumarinta. Guddiga Kaalmada Horumarinta ee OECD wuxuu ku qiyaasayaa in iskucelceliska dadaalka waddanku uu ka kici doono 0.42% sannadka 2004 illaa qiyaastii 0.57% illaa 2010. New Zealand waxaa ka go’an inay noqoto muwaadin caalami ah oo wanaagsan oo aan waxbadan ka qabanno sidii aan u caawin lahayn kordhinta tirada gargaarka ee la heli karo si loo taageero dadaallada yareynta saboolnimada ee caalamiga ah.Sannadkan waxaan ku dhawaaqnay kordhinta boqolkiiba 23 ee xaddiga kaalmada rasmiga ah ee horumarinta aan bixin doonno. Tani waxay na geyn doontaa qiyaastii 0.27 ama 0.28. Waxaan rabaa inaan waxbadan qabano, waxaadna dareemi kartaa sida Labour ay uga go’an tahay siyaasadooda Arimaha Dibada si loo gaaro. 35 boqolkiiba GNI ee ODA ilaa 2010.Laakiin waxaan ubaahanahay taageero xoogan oo bulshada rayidka ah ee New Zealand – si ay noogu dhawaato ilaa bartilmaameedka boqolkiiba 0.7.Dabcan maahan inta kaalmo horumarineed ee la bixiyo oo muhiim ah. Waa sida ugu wanaagsan ee tan loo isticmaalo. New Zealand waxay la shaqeyneysaa isbaheysi caalami ah oo ka socda dalalka soo koraya iyo kuwa horumaray iyo la-hawlgalayaasha kale ee caalamiga ah si loo hubiyo in ay jirto isbeddel tallaabo ah oo ku saabsan waxtarka gargaarka.Tani waxay ku lug leedahay hubinta in dadaalkeenna wadajirka ah uu ka dambeeyo horumarinta dadaallada uu hoggaaminayo dalka ee lagu yareynayo saboolnimada; kuwa adeegsada oo ka caawiya xoojinta maaraynta iyo nidaamyada maamul ee dalka soo koraya, halkii ay ka nuqulan lahaayeen mashaariicda iyo barnaamijyada leh lahaanshaha wadaagga dal yar oo soo koraya.Si kastaba ha noqotee, wax ka qabashada sinnaan la’aanta adduunka ayaa qaadan doonta heshiis wanaagsan oo ka badan kordhinta gargaarka. Ajandaha ganacsiga caalamiga ah weli wuxuu u baahan yahay in wax laga qabto: dalalka soo koraya waa in fursad la siiyaa si ay uga ganacsadaan sidii ay uga bixi lahaayeen saboolnimada. Dakhliga soo galaya ee raacaya natiijada saaxiibtinimo ee horumarka ee hadda socda ee wadahadalada ganacsiga ee Doha ayaa leh suurtagalnimada wareejinta gargaarka nacaska ah. Caqliga waddamada hodanka ku ah inay u furaan dhaqaalahooda wax soo saarka beeraha ee wadamada soo koraya ayaa ka awood badan.
Maxay tahay sababta looga filayo wadamada suufka ka soo saara Galbeedka Afrika inay qaadaan kharashaadka marka la eego sicirka suuqyada caalamiga ah ee hoose ee kaabayaasha Mareykanka ee wax soo saarayaasha Mareykanka ay tahay in soo saarayaasha adduunka ay sii wadaan inay qaadaan cawaaqibka kaalmooyinka beeraha ee EU iyo ilaalinta Siyaasadahaas midab kala sooca ah iyo ku dhaqanka ganacsiga ayaa saameyn ku yeelanaya qaar ka mid ah wadamada ugu saboolsan adduunka iyo rajada ay ka qabaan yareynta saboolnimada. Waxaa jiray calaamado xoogan oo ka imanayay wadamada soo koraya oo sheegaya in wareega Doha uusan guuleysan doonin ilaa aan wax laga qaban tabashooyinkooda. Hubinta dadka saboolka ah inay fursad u helaan inay kaqeybqaataan oo ay ka faa’iideystaan ​​caalamiyeynta waxay salka ku haysaa caqabadda ka jirta gacan ka geysashada maaraynta saameynta bulshada iyo dhaqaalaha ee geedi socodka. Waxaa jira caddaymo badan oo hadda – halkii aan la yaab lahayn – kobaca dhaqaalaha ee qaybaha ay saboolka ku tiirsan yihiin noloshooda ay ka waxtar badan tahay yareynta saboolnimada marka loo eego kobaca meelaha kale ee cidhiidhiga ah ee dhaqdhaqaaqa dhaqaale. Sidaa awgeed xoojinta beeraha ee wadahadalada ganacsiga, maxaa yeelay tan ayaa weli ah qaybta ay ku tiirsan yihiin inta badan saboolka adduunka. Si kastaba ha noqotee, fursadda ka-qaybgalka ayaa ka qoto dheer tan. Dadka saboolka ahi waxay u baahan yihiin inay awoodaan, oo ay dareemaan, awood loo siiyo inay ka qaybgalaan. Helitaanka adeegyo caafimaad iyo waxbarasho oo ku filan, iyo awoodda lagu adeegsan karo xuquuqda dimoqraadiyadda ee lagu taageerayo xuquuqdaas, waa in dhammaantood loo arkaa inay qayb ka yihiin xirmooyinka aan la kala qaybin karin ee xuquuqda aadanaha. Iyo, xaaladdan dhexdeeda, fiiro gaar ah waa in la sii siiyaa arrimaha sinnaanta jinsiga.Waa haweenka iyo qoysaska ay haweenku madax u yihiin ee sameeya tiro aan u dhigmin oo ah saboolka adduunka.Waa haweenka inta badan lagu qasbo inay qaataan qayb aan ku habboonayn kharashyada dib-u-habeynta dhaqaalaha; waana haweenka kuwa wali matalaya dowladaha iyo baarlamaanada aduunka.Intaas waxaa sii dheer, koritaanku waa inuusan noqon mid lumiya fursadaha jiilalka mustaqbalka inay kaqeybqaataan.Marka, guud ahaan duruufaha naga go’an ee dadaallada yareynta saboolnimada, New Zealand waxay sii wadi doontaa inay xoogga saarto joogtaynta deegaanka.Sida dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee Mareykanka ka dhacay ay muujiyeen, marka masiibooyinka deegaanku dhacaan inta badan waa kuwa saboolka ah, kuwaas oo ku bilaaba kuwa ugu yar, kuwaas oo runtii ku dambeeya inay noqdaan kuwa ugu daran ee ay saameysay.3: GunaanadYaraynta deynta dulsaaran ee saboolka, deynta dhibban, wadamada soo koraya waxay noqon doontaa talaabo kale oo suurta galinaysa kaqeybgalka. Soo-jeedintii ugu dambeysay ee G8 ee lagu maal-galinayo cafinta deynta waxa loogu yeero Dalalka Saboolka ah ee Culeyska Daran (“HIPCs”) waa tallaabo taariikhi ah oo loo qaaday dhanka saxda ah. Laakiin tani waxay u eg tahay inay ka tagi doonto waxyaabo aan caadi ahayn. Haddii lagu dabaqo oo keliya HIPCyada waxaan ku dambayn karnaa in waddammada saboolka ah qaarkood looga tago deyn ka badan kuwa hodanka ah. Markaa New Zealand waxay sii wadi doontaa inay cadaadis saarto soo jeedinta deyn cafinta si loo kordhiyo si loo daboolo wadamada kale ee liita ee liita deyntu sidoo kale. Waxaan diyaar u nahay inaan doorkeena ka ciyaarno maalgalinta waxa aan rajaynayno inay noqon doonaan mid si cadaalad ah oo cadaalad ah uga soo baxa wadahadalada ka socda Washington dabayaaqada toddobaadkan. [Kuxigeenada IDA waxaa loo qorsheeyay 24/9/05]Tarjumaadda faa’iidooyinka suurtagalka ah ee kororka gargaarka, kororka ganacsiga iyo deynta oo hoos u dhacday – iyo sidoo kale maareynta wax kasta oo saameyn xun ku yeelan kara caalamiyeynta – waxay si aad ah ugu tiirsan tahay xukunka dhammaan heerarka.Caalami ahaan New Zealand waxay gacan buuxda ka siin doontaa dadaallada dib loogu habeynayo UN-ka ee lagu heshiiyey Kulankii Heerka Sare ee Golaha Guud horraantii bishan. Waan ogahay inay jireen dhaleeceynno, qaar xoog ku taagnaa, in kasta oo natiijada laga yaabo inaanay daboolin wax kasta oo aan jeclaan lahayn, haddana weli waa natiijo taariikhi ah, waxaanan samayn doonaa intii karaankeenna ah si aannu u taageerno. Hadda waxaan haysannaa natiijo soo afjarta dadaallada shanta sano ah ee horumarinta iyo qeybaha kale, iyadoo la gaarsiinayo Baaqa Millennium iyo shirarka dambe ee caalamiga ah. Waxaan leenahay aqoonsi cad in horumarka, amniga iyo xuquuqul insaanka ay muhiimad gaar ah leeyihiin isla markaana isku tiirsan yihiin – iyo in guuldarada midkood ay hor istaagto guusha kuwa kale. Waxaan aqbalnay Guddi cusub oo dhismaha Nabadda ah iyo Golaha Xuquuqda Aadanaha – in kasta oo wadahadallada adag ay hadda raaci doonaan si loo dhammeeyo naqshadaha labadan xubnood ee cusub – gorgortanku wuxuu u eg yahay inuusan ka dhib yareyn toddobaadyada iyo maalmaha geedi-socodka Shirka. Ugu dambeyntiina waxaan haynaa dib-u-habeyn lagu sameynayo Xoghaynta iyo Maareynta Qaramada Midoobay, taasoo ah inay hagaajiso wax-ku-oolnimada, xoojiso kormeerka gudaha, dib-u-eegis lagu sameeyo dhammaan waajibaadka saaran shanta sano. Meelo kala duwan oo gorgortanka ah waxaan u maleynay in qaar, in yar, badankood, ama dhamaan faa’iidooyinkan ay lumi karaan. Ma aysan helin, waxaana heysanaa shaqo aan qabanno.Qaran ahaan – iyadoo heerarka gargaarku ay kordhayaan, deynta la dhimay iyo rajada laga qabo fursadaha ganacsi ee la ballaadhiyay – midda sii kordheysa waxay saarnaan doontaa dowladaha soo koraya si loo hubiyo in kheyraadka kordhay ee ay heystaan ​​loo adeegsado si waxtar leh si looga faa’iideysto masaakiinta.Gudaha, gudaheena, New Zealand, waxaan qorsheyneynaa inaan aad ugu dhawaano isku xirnaanshaha guud ee siyaasadeena. Si kale haddii loo dhigo haddii ujeeddooyinkeenna wanaagsan ee kordhinta qulqulka ODA ay taageerayaan ama suurtagal tahay inay waxyeelleeyaan saameynta siyaasadaha kale ee New Zealand ee saameynta ku leh wada-hawlgalayaasha waddankeena soo koraya.Caalamku halkaan ayuu joogaa. Caqabada ayaa ah sida loo maareeyo si aan u siinno rajo nolol wanaagsan oo aan u sugno xuquuqda masaakiinta. Koboca mustaqbalkeenna gaarka ah iyo amniga iyo fursadaha shaqo ayaa ku xirnaan doona tan. Laakiin, si siman muhiim ah, waxaan leenahay waajibaad anshaxeed inaan hubino.Sida ugu dambaysay ee Warbixinta Horumarka Aadamuhu u dhigto, 2005 waxay calaamadeysaa isgoysyada.Waxaan qaban karnaa ama aan ku guuleysan karnaa ballan qaadka yareynta saboolnimada iyo Yoolalka Horumarinta Millennium, ama waxaan ku sii wadi karnaa ganacsiga sidii caadiga ahayd waana inaan u sharaxnaa carruurteenna – iyo carruurta saboolka ah ee adduunka – sababta aan ugu oggolaanay xilligan inay dhaafto.